Asa fampihorohoroana ! | NewsMada
Asa fampihorohoroana tsy tahaka ireny fahita any ivelany ireny, toy ny niseho tany Frantsa, na Etazonia, na ny fahita amin’ny televiziona any amin’ireo firenena arabo, ny miseho eto amintsika, fa asa fampihorohoroana hafa kely. Hafa kely satria ny jiolahy no mampihorohoro, kanefa mety misy koa ny mpaniraka hampihorohoro?
Raha zohiana aloha ireny zavatra niseho tany Toamasina ireny, iza no tsy hihorohoro manoloana ny asa famonoana tamin’ny fomba feno habibiana ilay tovovavy hita faty iny? Mbola nitohy tamin’ny fanapahana tanan’olona tsy fantatra ihany koa, ary naseho vahoaka. Raha fampihorohoroana tokoa, azo lazaina fa tratra ny tanjona. Raha asan-jiolahy tsotra, efa sangy mihoatra ny loha ny vitan’ny olon-dratsy.
Hatramin’ny dahalo, mahavita mampihorohoro ny iray tanàna any amin’ny faritra atsimo any. Dahalo anjatony mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika manafika tanàna, mandoro, mamono. Karazam-pampihorohoroana ihany koa izany na tsy misy baomba aza.
Ary ireo mpivarotra amoron-dalana? Mampihorohoro ny mpitondra sy ny mpitantana ka tsy nahavita nanery azy ireo tsy hivarotra amoron-dalana intsony. Mafy tokoa, ary tsy misy tsy manaiky izany ny rehetra, raha ny hamaroan’ny mpivarotra amoron-dalana nihetsika ny zoma lasa teo. “Saika vaky ny sarom-bilany”, hoy ny mpanisy sira! Nihorohoro tanteraka ny tao ambony? Soa ihany fa tsy lasa lavitra iny hetsika iny, ary somary maty ihany ny afo, fa nihorohoro teo anoloan’ny Emmo/Reg ny mpitarika ka tsy sahy niverina intsony.
Mety tsy vaovao amin’ny sofin’ny maro intsony ny hoe asa fampihorohoroana, saingy vaovao kosa ny zavatra aterany. Raha lasa “asa” tokoa izy io ka tanteraka ny “horohoro”, mety ho lasa andavanandrom-piainan’ny olona. Raha izay no izy, ahoana ny hiafaran’ny firenentsika? Afaka manaisotra izany toe-javatra mitady hahazo vahana eto amintsika izany ny mpitandro filaminana, ny fanjakana. Tompon’andraikitra voalohany ireo, tsy afa-miala amin’izany ihany koa ny vahoaka rehetra.